अंग प्रत्यारोपणमा प्रभावी - फ्रन्टपेज - साप्ताहिक
नेपाल सरकारको मातहतमा रहेका ४ हजारभन्दा बढी स्वास्थ्य संस्थामध्ये आशालाग्दा संस्था खोज्दै जाने हो भने हातका औंलामा गन्न सकिन्छ । यस्ता स्वास्थ्य संस्थाहरूमध्ये सहिद धर्मभक्त मानवअंग प्रत्यारोपण केन्द्र, भक्तपुर पनि एक हो । पूर्व स्वास्थ्य–सचिव डा. प्रवीण मिश्रका अनुसार मानव अंग प्रत्यारोपण आफैंमा अति नै जटिल काम हो । एक जनाको शरीरमा भएको अंग अर्को मानिसमा लगेर जोड्ने काम त्यति सजिलो होइन, प्रविधीले यसलाई सम्भव बनाएपनि चिकित्सकको मेहनत र लगावबिना अझै पनि यस्तो कार्यलाई दुर्गम्य नै मानिन्छ, डा. मिश्र भन्छन् ।
यदि केन्द्रका चिकित्सक, नर्स आदि टिमको मेहनत र लगाव नहुने हो भने अहिले यो केन्द्रले पाएको सफलता सम्भव थिएन । अहिले यो केन्द्रले प्राप्त गरेको सफलता, परिणाम र यसको चर्चा हेर्दा विश्वका कुनै पनि मानव अंग प्रत्यारोपण गर्ने केन्द्र भन्दा कम छैन ।
चिकित्सा विज्ञानमा मानव अंग प्रत्यारोपण गर्नुलाई आफैंमा जटिल विधा मानिन्छ । अझ त्योभन्दा पनि प्रत्यारोपण पछि उत्पन्न सक्ने संक्रमण कम गर्नु झनै ठूलो चुनौती मानिन्छ । अंग लिने—दिनेमा कुनै किसिमको संक्रमण भए प्रत्यारोपणपछि पनि उक्त अंगले काम नगर्ने अवस्था आउँछ । संक्रमण हुने सम्भावना प्रत्यारोपणको पहिलो अवस्थामा बढी हुन्छ । जुन अस्पतालमा रहँदा बढी हुन्छ, तर मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रमा गरिएका अंग प्रत्यारोपणहरूको सन्दर्भमा त्यस्तो संक्रमण र अंग प्रत्यारोपण सम्बन्धी असफलताको दर ज्यादै न्यून छ ।
विगत पाँच वर्षमा गरिएका अंग प्रत्यारोपणको सफलताको दर ९८ प्रतिशतको आसपासमा छ भने पछिल्ला २ सय वटा अंग प्रत्यारोपणमा केन्द्रले शतप्रतिशत सफलता प्राप्त गरेको छ । हामी कहाँ अंग प्रत्यारोपण पछिको असफलताको दर ज्यादै न्यून छ, अस्पतालका निर्देशक शल्यचिकित्सक डा. पुकारचन्द्र श्रेष्ठ भन्छन्— यसरी हामीले प्राप्त गरेको सफलताको कारण प्रत्यारोपणपछि हाम्रो टिमले गर्ने पोस्टअप केयर, बिरामीको नियमित फलोअप तथा प्रत्यारोपणका समयमा खट्ने दक्ष टिम नै हो ।
२०६९ सालमा स्थापना भएको यो केन्द्रमा सुरुका दिनमा तीन जना चिकित्सक, एक जना नर्स एवं एक जना रिसेप्सनिष्ट कार्यरत थिए, जसमा अंग प्रत्यारोपण शल्यचिकित्सक डा. पुकारचन्द्र श्रेष्ठ, नेफ्रोलोजिस्ट डा. कल्पना श्रेष्ठ तथा कनिष्ठ चिकित्सक डा. लुसन सिंह थिए । संस्था स्थापना भएको ६ महिनापछि मिर्गाैला बिग्रनेहरूका लागि डायलसिस सेवा सुरु भयो भने त्यसको तीन महिनापछि उक्त केन्द्रले पहिलो मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेको थियो । प्रत्यारोपण सुरु गर्दाका बखत केन्द्रमा करिब ५० जना कर्मचारी रहेको डा. पुकार श्रेष्ठ सम्झन्छन् । अहिले यो संख्या २ सय पुगेको छ ।
सुरुका ५ महिनामा १३ जनामा अंग प्रत्यारोपण भएकोमा हाल सातामा तीनदेखि पाँच जनासम्ममा मिर्गौला प्रत्यारोपण हुने गरेको केन्द्रको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यसरी यो केन्द्रलाई छोटो समयमै एउटा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सेवा सुविधा दिन सक्ने बनाउन त्यसको नेतृत्वले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको पूर्व स्वास्थ्य–सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठ बताउँछन् ।
डा. पुकारचन्द्र श्रेष्ठजस्तो लगनशील नेतृत्व नहुँदो हो त यो केन्द्रले पनि अन्य सरकारी अस्पतालकै हविगत ब्यहोर्नुपथ्र्यो कि ? शान्तबहादुर श्रेष्ठ थप्छन्—संस्थालाई अघि बढाउन आफ्नो क्षेत्रमा अब्बल भएर मात्र हुँदैन, टिमलाई पनि समेटेर लान सक्ने क्षमता हुनुपर्छ, त्यो क्षमता डा. पुकारचन्द्र श्रेष्ठमा भएकै कारणले यस्तो सफलता सम्भव भएको हो ।
मृगौला रोगको बहिरंग सेवाबाट सुरु भएको यो केन्द्र स्थापना भएको पाँच वर्षमा मिर्गाैला र कलेजो रोगका सामान्य समस्यादेखि प्रत्यारोपणसम्म गर्न सक्ने क्षमतामा विकास भएको छ । मुटु र फोक्सोसम्बन्धी रोगका पनि प्रत्यारोपणबाहेक अन्य सबै किसिमको उपचारका लागि केन्द्र तयार रहेको निर्देशक डा. श्रेष्ठ बताउँछन् । अहिले केन्द्रले मुटु र फोक्सो प्रत्यारोपणका लागि पनि आवश्यक पूर्वाधारको विकास गरिरहेको डा. श्रेष्ठको दाबी छ ।
भक्तपुर जिल्ला अस्पतालको एक छेउमा सय शैय्याको अस्पतालका रूपमा सञ्चालन भैरहेको यो केन्द्रले सेवा विस्तार गर्न स्थान पनि खोजिरहेको छ, जसका लागि नेपाल ट्रस्टको भक्तपुरमा रहेको खाली जग्गा, चाँगुनारायण नगरपालिकामा रहेको नागरिक उद्यान प्राधिकरणको जग्गा तथा भक्तपुर नगरपालिकासँग कुराकानी भैरहेको डा. श्रेष्ठ बताउँछन् ।
जग्गा प्राप्त गरी नयाँ भवन निर्माण भएपछि हाल सय शैय्या क्षमतामा सञ्चालन भैरहेको केन्द्रलाई ३ सय शैय्याको बनाउने योजना छ । त्यसमध्ये १ सय शैय्यामा छुट्टै डाइलोसिस सेवा सञ्चालन गर्ने, ७ वटै प्रदेशमा अंग प्रत्यारोपण केन्द्रको सेवा विस्तार गर्ने तथा मानव अंग प्रत्यारोपणसम्बन्धी शैक्षिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने योजना रहेको पनि डा. श्रेष्ठले बताए ।
ज्योति मगरले जिल्याइन्